Maggot BSF किन्नुहोस् र कसरी मार्केटिंग म्यागजिन बेच्न र बेच्नुहोस् • Yurie BSF
Maggot BSF खरिद गर्नुहोस् र बेच्नुहोस्
बीएसएफ Maggot बिक्री र मागग मार्केटिंग मार्केटिंग - बीएसएफ मगगाट बिक्री व्यवसाय वा बीएसएफ चुम्बन कि केहि इंडोनेशियाली मान्छे को लागि लार्वा वा चुम्बन छ कि अझै पनि एक असामान्य चीज हो। विदेशमा त्यहाँ, यो व्यवसाय दशकौंको लागि काम गरिसकेको छ। बीएसएफ मगगोटको बीउहरू ब्रोडर्सहरूको गुणस्तर खरिद गर्दा कस्तो आवश्यकता पर्दछ, तिनीहरूले बीएसएफ मगग खरीद गर्नु अघि जाँच र जाँच गर्नुपर्छ।
ती व्यक्तिहरूको लागि चिन्ता बिना म्यागग्नको लागी आधुनिक मगगोट बीएससी खेतीको तरिकाहरू थाहा छैन र उनीहरूको दिमागमा तिनीहरूले गन्दा, गहिरो र मुर्ख लगाउँछन्। स्याउको स्याउको आगमनको उल्लेख नगर्ने रोगको स्रोत राख्ने।
यसकारण तपाईंलाई जग्गाको सही खेती सिक्न आवश्यक छ, ताकि केवल कालो मक्खन वा बीएसएफ तपाईको खेतीमा हो। परिणाम साफ छ, मुर्गी छैन र सस्तो सस्तो लागतको साथ।
कालो सैनिक मक्छ
प्रसिद्ध मा औषधि, पुलिस र यति संसारको लागि माछाको खाना, कुखुरा, रटाइलहरू जस्ता लाभहरूको असंख्य छ।
मगगोट व्यवसाय यदि तपाईले यो चलिरहेको बारे गम्भीर छ भने ठूलो मुनाफा प्राप्त गर्न क्षमता छ, आला बजारहरू पशु फिडको रूपमा, संख्याहरू शानदार छन्, केवल इन्डोनेसियामा स्थापित राष्ट्रीय स्तरका पशु फिड कम्पनीहरु को दर्जनौं हेर्न।
धेरै फिड कम्पनीहरू एक संकेत हुन् कि जनावर फिड व्यवसाय धेरै लाभदायक छ। यदि तपाइँ यो व्यवसाय सुरू गर्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, तपाइँलाई पहिला व्यवसायको विश्लेषण जान्नुपर्दछ।
मैगगोट बिजनेस को विश्लेषण
विश्लेषणमा बीजको मूल्य, मार्केटिंग, फिडको प्रकार, संस्कृति मिडिया, समावेश गर्दछ। यस व्यवसायमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तिनीहरू गन्ध नगर्ने र त्यसो कि उनीहरूले लाभ पाउनेछन्, मिडिया भनेको कार्बनिक अपशिष्ट, पशुधन भान्सा वा अपशिष्ट हुनुपर्दछ।
मगगको खेतीको विश्लेषणको विस्तृत गणनाको लागि प्रारम्भिक मात्रामा ठूलो-माछा मैग्गोट खेतीमा अध्ययन गर्न सकिन्छ> मगग खेती व्यापारको विश्लेषण
मगग खेती किन बेग्लै हुन्छ? किनभने गन्धले हरी मक्खनलाई निम्तो दिनेछ भने, र परिवार र वरपर समुदायमा प्रदर्शन गर्न ट्रिगर बन्नुहोस्।
बेजोड मगगट खेती गर्ने प्रक्रियाले तपाईंलाई सुरक्षित र सजिलो बनाउँछ, सुरक्षित किनभने तपाईं परिवार र सान्त्वना द्वारा प्रदर्शन गरिनेछैन किनभने तपाईंको व्यापार सदाको लागि जारी राख्न सक्छ।
Maggot खेती व्यापार को लागि संभावनाहरु
म्यागोट खेतीमा थुप्रै फाइदाहरू छन्, जसमध्ये एक हो कि व्यवस्थापन धेरै सजिलो छ र प्रति दिन एक देखि दुई घण्टा लिन्छ।
त्यसैले यस व्यवसायको सुरुवातको लागि तपाईंले यसलाई एक साइड ब्यापारको रूपमा वा सानो पैमानेमा चुम्बन खेतीको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। विकास पछि गरिन सक्छ। तैयार हुन आवश्यक लागतहरूको गणना गर्न सक्नुहुनेछ मगग व्यापार व्यवसाय.
म्याग्गोट उत्पादन गर्न आवश्यक पूंजी अपेक्षाकृत सानो छ, किनकि यस खेतीको लागि सामग्री घरमा उपलब्ध अवयव सामग्रीहरू प्रयोग गर्न सक्दछ। दैनिक अपरेशन वा संस्कृति संस्कृतिको खर्चको लागि पनि धेरै सस्ता सजिलो हुन्छ।
किन सस्तो र लगभग नि: शुल्क छ? किनभने अवयवहरूले मुख्यतया कार्बनिक अपशिष्ट, पशुधन खाद र बर्बाद प्रयोग गर्दछ जुन हाम्रो वातावरणमा व्यापक रूपमा उपलब्ध छन्।
मगगटमा निहित पोषक तत्वहरू धेरै पूर्ण छन् र प्रोटीन सामग्री पनि उच्च छ, त्यसैले यो वैकल्पिक पशु फिडको रूपमा प्रयोग गरिन्छ र सबै प्रकारको माछा र कुखुराको लागि प्राकृतिक पशु फिडको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
बीएसएफ Maggot मूल्य
खरिद गर्न र कुन उद्देश्यको लागि गुणवत्तामा निर्भर गर्दछ? यदि catfish वा अन्य माछा जनावरको खानाले पोल्ट्री सहित Rp5.000-Rp9.000 / kg को बीचमा।
Rp10.000 - Rp500.000 / kg को बीचको बीजको रूपमा, गुणवत्ताको आधारमा। फरक फरक फरक छ। कसरी पत्ता लगाउनु राम्रो गुणस्तरको बीउ आउन सक्छ र हेर्नुहोस् कसरी उनीहरूको सीधा व्यवहार गर्ने।
वा बीउ को हेरचाह गर्ने बारे विक्रेतालाई सोधेर। यदि हेरचाहको ढाँचा केवल कचरा दिइएको छ भने, गुणस्तर होइन। यो गुणस्तर माछा र पोल्ट्री फिडको लागि राम्रो छ। बीउको रूपमा प्रयोग गरिने छैन।
प्रजननहरू छनौट गर्नुहोस् र धेरैले केवल पाठ वा लिखित प्रशंसापत्रहरू मात्र होइन, सिफारिसहरू पाउनुहोस्। मगग खेतीको सफलतामा छिटो राम्रो बीज चयन गर्नुहोस्।
मूल्यहरु लाई सामान्यतया सीधा गुणवत्ता को आनुपातिक हुन्छ, अधिक महंगी को गुणवत्ता को बेहतर। तर पहिले किसानलाई पनि जाँच गर्नुहोस्!
कसरी बीएसएफ जादुई मार्केटिंग
यो तपाईं को लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो व्यापार सुरु गर्न चाहानुहुन्छ, पहिलो सिक्न कसरी लार्वाको फसल बजारमा। त्यसोभए जब तपाईं साँच्चै साँच्चिकै सुरुवात गर्नुहुन्छ।
बीएसएफ मगगको खेती निम्न तरिकामा मार्केट गर्न सकिन्छ: * प्रत्यक्ष रूपमा माछा किसानहरू, पोल्ट्री, रेपिलीज र शौकहरू भ्रमण गर्छन्। तपाईंको लागि एक प्रभावकारी तरिका सीधा जान्छ र निकटतम वातावरण मा किसानहरु लाई प्रस्तावित छ। एक पारस्परिक लाभकारी दृष्टिकोण र सहयोग लिनुहोस्।
उदाहरणका लागि: किसानहरूको सहयोगलाई निम्तो दिनुहोस् जुन पहिल्यै भूमि र माछाको कायम राख्ने अनुभव हो, जबकि हाम्रो चुम्बन फिड प्रदान गर्दछ। यो सिफारिस गरिएको छ कि यो सहयोग सम्झौता एक लिखित सम्झौता गरिनेछ।
त्यसो भए के भयो भने कुनै कैफफिश किसानहरू वा चिकन किसानहरू? यदि निकटतम उपलब्ध छैन भने, तपाईं फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, लिङ्कडिन, यूट्यूब वा नि: शुल्क वेबसाइट बनाउन सामाजिक मीडिया उपकरणहरूको प्रयोग गरेर यसलाई बजार बनाउन सक्नुहुन्छ।
बीएसजी मागेगाट मार्केटिंग
तपाईंको Maggot व्यापारलाई बढवा दिनुहोस्।
विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा लगातार पोस्ट गर्नुहोस्, माछा र कुखुराको साथ लिङ्क भएका समुहहरूसँग गुंजाइज गर्न नबिर्सनुहोस्। फेसबुकको लागि तपाईले व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्नुहोला, खाता पृष्ठ सिर्जना गर्नुहोस् वा पृष्ठ।
ट्विटर खाताहरूमा पदोन्नति
हामी हाम्रो व्यापारलाई बढावा गर्न सँधै सोशल मिडिया चहचहाना प्रयोग गर्न सक्छौं। तर राम्रो, विशेष गरी चहचहानाको माध्यमबाट प्रचारको लागि, निःशुल्क वेबसाइट तयार पार्नुहोस्। यदि त्यहाँ नयाँ पोष्टहरू जुन हामीले सिर्जना गरेका वेबसाइटबाट साझेदारी गरेका छन्।
Instagram खाताहरूमा प्रचार
मेड एसओएसमा यो फेसबुक खाताको तुलनामा यसको उच्च समापन दरको लागि प्रसिद्ध छ, हुनसक्छ फेसबुकले यसलाई सामाजिक सञ्जालका लागी एक उपकरणको रूपमा थप प्रयोग गर्दछ, जबकि इन्स्टाग्राम यो अधिक कारोबार उन्मुख छ।
यो विधि, यद्यपि एक सानो "जटिल" तर हाम्रो व्यापार सम्पत्ति हो, तर दीर्घकालिक परिणाम धेरै राम्रो छन्, यसको वाहेक हामी पनि चलाएको व्यवसायको सम्भावित उपभोक्ताहरूको विश्वास बढाउन एक उपकरणको रूपमा।
यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, यस मिडिया वेबसाइटको साथ तपाई विदेशबाट सम्भावित ग्राहकहरू आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ, निस्सन्देह तिनीहरू प्राय: ठूलो मात्रामा आदेश र मूल्य पनि स्थानीय बजार भन्दा राम्रो हुन सक्छ।
अब एक वेबसाइट बनाउनु धेरै सजिलो र सस्तो छ, यदि तपाइँ Google बाट सुविधाहरू प्रयोग गर्नुहोला भने जस्तै ब्लडस्पेस र गुगल मेरो व्यवसाय हो, दुवै 100% निःशुल्क हुन्। मा निःशुल्क पदोन्नतिहरूको उदाहरण google blogspot
अनलाइन स्टोर बनाउन द्वारा प्रमोशन
त्यहाँ धेरै सेवाहरू छन् कि सबै भन्दा सस्तोमा सस्ता बाट अनलाइन भण्डारहरू बनाउन प्रस्ताव प्रस्ताव गर्ने। तपाईं केवल आफ्नो बजेट अनुसार छनौट गर्नुहोस्। यो विधि गुगल प्रकारमा छ "अनलाइन पसल बनाउने सेवा"
सावधानी छान्नुहोस्, तिनीहरूमध्ये केही राम्रो छन्, केहि पनि सावधान रहनु पर्दछ। ढिलो र तिनीहरूलाई धेरै सोध्नुहोस्, तपाईलाई तयार पार्नु कुन चरणहरूमा सुझावहरू सोध्नुहोस्। सेवाहरू छनौट नगर्नुहोस् कि तिनीहरूले हाम्रो लागि काम गर्ने अनलाइन स्टोरको लागि राम्रो सल्लाह प्रदान गर्न सक्षम छैनन्।
अन्य पदोन्नति स्थानहरु
तपाईले साइटहरू जस्तै किम, टोक्योडिया, र अरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मगगट खेती व्यापारको लागि प्रशिक्षण सेवा खोल्नुहोस्। हाम्रो चुम्बन व्यवसायको लागि द्रुत रूपमा बढ्नको लागी, हाम्रो रणनीति पनि क्रिएटिव र अनोखी हुनु पर्छ, जसलाई मध्ये एक चुम्बन खेती व्यापार प्रशिक्षण सेवा खोल्न को लागी, यो रणनीति किन महत्त्वपूर्ण छ ???
सामान्य जनतालाई परिचय गराउन कि तपाईं एक चुम्बन खेती व्यापारको हुनुहुन्छ। यो व्यापारको प्रशिक्षणले तपाईंको व्यापारलाई छिट्टै शहर र शहरबाट बाहिर फैलिएको छ।
तपाईंको व्यवसाय चाँडो प्रसिद्ध हुनेछ किनकि यसले तिनीहरूलाई व्यवसाय प्रशिक्षण दिईएको छ। मिडिया व्यवसायको पदोन्नतिको तुलनामा मिडियाको माध्यमले पदोन्नतिको तुलनामा धेरै प्रभावकारी छ।
अरूको लागि उपयोगी। चिन्ता नगर्नुहोस् यदि तपाईंले प्रशिक्षित गर्नुभएको छ भने मगग खेती व्यापार चलाउन जारी राख्न चाहानुहुन्छ। सम्भवतः प्रशिक्षकहरूले तपाईका साझेदार बन्न सक्नेछन्। यो व्यापार क्षमता अझै पनि बढ्दो आवश्यकताहरु र सीमित आपूर्ति दिइएको धेरै ठूलो छ।
व्यापारिक प्रशिक्षण मूलतः सामाजिक उद्देश्यका लागि मात्र थियो, तर यो पछि म्याग्वेको खेतीमा समर्थन वा व्यापार प्रशिक्षण / उत्प्रेरक हुन सक्छ।
Maggot खेती व्यापार को लागि प्रशिक्षण खोलन अतिरिक्त लागत को आवश्यकता छैन, किनकी तैयारी मा तपाईं सामान्य को लागि तैयार र सक्रिय हो। तपाईले मात्र सही बाटो र चरणको व्याख्या गर्नुभयो, सुरुदेखि अन्त्यमा के गर्नु पर्छ।
म्यागगोटको बीज बेच्नुहोस्
कसरी सुपीरियर र स्वस्थ बीएसएफ माग्गा बीउ छनौट गर्नुहोस्। जब तपाईं प्रजनन वा खेतीको लागि चुम्बनको बीउ छान्नुहुन्छ, तपाईले राम्रो र स्वस्थ बिरुवाहरू छनौट गर्नुपर्छ।
यो कारणले गर्दा उत्तम बीउले धेरै स्वस्थ बीएसएफ लार्वा / जादुई स्वस्थ उत्पादन गर्नेछ। परिभाषा अनुसार, उच्च बीउहरू काला सैनिक फ्लाइको बीउ हुन् जसले उच्च गुणहरू छन्, अर्थात् आमाबाबुको मौलिक प्रकृति देखाउन र उच्च पोषक तत्वको सामग्री देखाउन सक्षम हुन्छन् ताकि तिनीहरूसँग उच्च आर्थिक मूल्य छ, र बिरामी छैन।
यो किसानहरूलाई कसरी हेरचाह गर्ने र उनीहरूको हेरविचारको समयमा बीउहरूलाई कस्तो प्रकारको खाना बीएसएफको बीउ बन्नको लागि दिइन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ।
बीएसएफ माग्गोट कुनै पनि अन्य जनावर जस्तै हो जसलाई रखरखाव को अवधि मा पर्याप्त पोषण प्राप्त गर्नु पर्छ। मीडिया तैयारीको सुरुवातमा पोषण थप गर्नुहोस् जुन बीएसएफ को उत्तेजित गर्न र अण्डाहरु लाई मिलाउन को लागी कार्य गर्दछ।
उत्तम बीउको फाइदाहरू
उच्च उत्पादन र सजिलै मरेको छैन
तुरुन्तै वयस्क बीएसएफ / बीएसएफसी मक्खीमा हान्छन्
लार्वाको कम मृत्युदर दर
बीएसएफको अन्डा गुणस्तरको स्तर 500 देखि 900 म्याग्गोट पूरेल प्रति एक अण्डा बीचको छ
ठूलो र ठूलो आकार लार्वा वा चुम्बकीय छ
कीट र रोगहरूको प्रतिरोधी, विशेष गरी एक हप्ता भन्दा कमको शिशु चरणमा
बीएसएफको बीउको माथिल्लो गुणहरू माथि आनुवंशिक रूपमा राख्न सकिन्छ यदि बीएसएफको बीउ प्रकृया गरिन्छ।
जब बीएसएफको बीउ किन्नुहोस् कि एक्सेलले भरिएको लार्वा / चुम्बन स्टेस्टे उत्पादन गर्नेछ, मुख्य कुरा सामान्य 18 दैनिक को तुलनामा एक दिन 30 चाँडै फसल काट्नु हो।
चरम बीउ अत्यधिक चरम परिस्थितिको लागि प्रतिरोधी हुन्छ, विशेष गरी विशेष गरी जब एक नयाँ हप्ता उमेरको माथि र माथि सम्म पुग्यो, कम बीजको मृत्यु दर, छिटो वृद्धि र खेतीको संस्कृतिको उत्तरदायित्वका कारण सजिलै प्रचार गरिन्छ।
यदि न्यूनतम 85% माथिको सूचीको उच्च स्वभाव पूरा भएको छ भने, कालो स्याउले उडेको बीज उच्च रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ। यदि यो माथि 85% आवश्यकताहरू पूरा गर्दैन भने, त्यसपछि बीएसएफको बीउ सामान्यको रूपमा वर्गीकृत गरिन्छ।
संरचित फिड दिइयो
सुपीरियर बीउ: ठूलो ठूलो वर्दी 2cm
मासुको मोटाई: मोटा
आन्दोलन: सक्रिय चाल
बिरुवा रंग: कालो
अरोमा: कुनै गन्ध छैन